Ahoana ny fomba hanaovana voninkazo amin'ny taratasy krep | Asa tanana
Irene Gil | | asa-tanana, Asa tanana taratasy
Efa manakaiky io Fetin'ny mpifankatia, fotoana izay itiavantsika olon-drehetra bebe kokoa, maniry hihaona amin'ny namana, fianakaviana ary mpiara-miasa.
Tsy misy tsara tarehy kokoa noho ny manome zavatra nataontsika, noho izany antony izany no itondrako anao a fampianarana mba hanao voninkazo taratasy tsara tarehy crepe izay ampiasaina hanome sy handravaka.
Tena mora vidy izy ireo ary mora atao, ka andao jerena ny dingana tsirairay:
1 Fitaovana hanaovana voninkazo taratasy:
2 Torolàlana amin'ny fanaovana voninkazo taratasy
2.1 1 Dingana:
2.2 2 Dingana:
2.3 3 Dingana:
2.4 4 Dingana:
2.5 5 Dingana:
2.6 6 Dingana:
2.7 7 Dingana:
3 voninkazo taratasy
Fitaovana hanaovana voninkazo taratasy:
Taratasy Crepe amin'ny loko irina, nisafidy mavokely aho, satria mitondra antsika amin'ny tantaram-pitiavana, mety amin'ny Andron'ny mpifankatia. Raha tsy manana taratasy crépe ianao, eto dia azonao atao ny mividy azy amin'ny loko tianao indrindra.
Tady vita amin'ny loko matevina.
Ny bokotra, hety ary lakaoly dia tsara kokoa amin'ny silipo.
Torolàlana amin'ny fanaovana voninkazo taratasy
Ny zavatra voalohany ataontsika dia tapahina efamira, sosona maromaro amin'ny taratasy.
Arakaraky ny habetsaky ny sosona ananantsika no hampisy fiadiana voninkazo bebe kokoa.
Amin'ny faran'ny kianja iray dia manomboka aforeto toy ny zig zag, mitazona ny sosona rehetra miaraka.
Tokony ho hitantsika amin'ny sary etsy ambany.
Manarona ny tariby amin'ny kasety maitso izahay, mampiasa ny lakaoly mba tsy hampiala antsika.
Ny haben'ny tariby dia miankina amin'ny haben'ny voninkazontsika, tokony hitovy izy io.
Ankehitriny, apetrantsika ao anaty ilay izy antsasaky ny taratasy, manindry mafy, araka ny hitantsika amin'ny sary etsy ambany.
Manomboka manokatra ny felany izahay, fa ampy izay misaraka tsara ny sosona taratasy tsirairay, manandrana mahazo endrika boribory.
Tokony hitovy amin'ny sary etsy ambany isika:
Manomboka ny ampahany mahatsikaiky indrindra izahay, dia ny fampiasana ny saina, handravahana.
Amin'ity tranga ity dia nampiasa bokotra aho hanamboarana ny afovoan'ny voninkazo.
Avy eo koa, azon'izy ireo haingoina kofehy sy bokotra.
Toy izao no fijeriny:
Miaraka amin'ireo voninkazo ireo dia afaka manao izy ireo corsages, haingo ny latabatra ary omeo fanomezana.
Azonao atao koa ny mamorona karazana voninkazo taratasy miaraka amin'ity dingana ity ihany amin'ny alàlan'ny fanovana tsotra izao ny faran'ny tendron'ny taratasy. Amin'ity sary manaraka ity dia asehoko anao ny fanapahana telo samy hafa izay hanome famaranana hafa ny voninkazoo.
Hetezo amin'ny tendrony ny tendrony mba hivoahan'ny sisiny maranitra, raha manapaka kely ianao dia hahazo varotra, ary raha avelanao hiolakolaka izy ireo dia hitovy amin'ny raozy ny voninkazo.
Tadidio fa arakaraka ny haben'ny kianja dia lehibe kokoa ny voninkazo taratasy crepe, ary arakaraka ny hampiasanao ny efamira dia ho matevina kokoa izy. Tokony ho raisina ihany koa izany rehefa mandrafitra azy ireo.
Manantena aho fa mankafy ianareo ary mahita hevitra misimisy kokoa izahay amin'ny manaraka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Asa tanana » Asa-tanana sy fitaovana » Asa tanana taratasy » Fomba fanamboarana voninkazo amin'ny taratasy crepe
miry2017 dia hoy izy:
Tena tiako io hevitra io, misaotra
Mamaly an'i miry2017
akorandriaka dia hoy izy:
Salama misaotra betsaka, mora be sy azo ampiharina izy io
Mamaly an'i conchis
Tena mora sy tsara tarehy, misaotra.